Fampivoarana ny vokatra vaovao
Ho an'ny bilaogera hatsaran-tarehy matihanina, tsy misy borosy makiazy toy ny chopstick rehefa misakafo. Ny fitaovana ilaina indrindra amin'ny fampiharana makiazy dia ny borosy makiazy. Mba hanatsarana ny fahalavorariana makiazy, mazava ho azy, ny zava-dehibe indrindra dia ny fampiasana borosy fanaovana makiazy ho an'ny faritra tsirairay amin'ny makiazy. Betsaka ny karazana brushe ...
Tutorial momba ny makiazy vao manomboka
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-07-14
Voalohany indrindra, ny ampahany fototra dia mbola tena zava-dehibe ho an'ny vao manomboka. Ny dingana voalohany dia mazava ho azy ny fanadiovana ny tarehy (mifoha maraina hanasana menaka sy hatsembohana be loatra amin'ny tarehy). Ny tapany faharoa kosa dia ny mamafa namaoka ronono sy crème ronono (manalefaka ny tarehy indrindra. Amin'ny hoditra maina, raha ity dingana ity ...
MURAN ao amin'ny "COVID-19"
Tamin'ny fotoana nitrangan'ny valan'aretina, ny orinasanay dia nanangana toe-tsaina feno fanoloran-tena amin'ny "fakàna ny foko" ary mandeha miaraka amin'ny "faniriana", manome tolotra mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny fiarahamonina, manome hazavana sy hafanana ho an'ity fiarahamonina ity, nanampy ny hafanam-po ho an'ny fiarahamonina, Ny fotoana dia mandray anjara betsaka. W ...
Yiwu Muran Import and Export Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2009, miorina amin'ny renivohitry ny entana kely-Yiwu, Sina Ny orinasa dia nampihatra hatrany ny fitantanana siantifika ary nanitrikitrika ny "kalitao aloha" hahazoana ny tsena, ary efa tsara noraisin'ny c vaovao sy taloha ...